Tu Tu Tha: စက်ရုပ်အမှတ် ....
Friday, May 15, 2009 | Labels: ဝတ္ထုတို |
This entry was posted on Friday, May 15, 2009 and is filed under ဝတ္ထုတို . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
copy သွားတယ် အိမ်ကျမှပဲ အေးဆေးဖတ်တော့မယ်..း) ဒါက ကောမန့်ဦးသွားတာ.. ဟိ
ဟုတ်တယ်။ ကော်ပီကူးသွားပြီးဖတ်ရမယ်။ ဘာဖြစ်သွားမှန်းကို မသိလိုက်ဘူး။ :(
ကတောက် ... လက်စသတ်တော့ . .ဒင်းဟာဒင်း .. တိုင်ပတ်နေတာကိုး ...